छि! छि!! बाउ छोराले एउटै महिलासंग….. बुहारी भन्छिन् ‘अब सासु भनौं की सौता ?’ (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > छि! छि!! बाउ छोराले एउटै महिलासंग….. बुहारी भन्छिन् ‘अब सासु भनौं की सौता ?’ (भिडियो हेर्नुस्)
छि! छि!! बाउ छोराले एउटै महिलासंग….. बुहारी भन्छिन् ‘अब सासु भनौं की सौता ?’ (भिडियो हेर्नुस्)
admin January 10, 2021 January 10, 2021 जीवनशैली, भिडियो, समाज	0
ओखलढुंगा । सुन्दा पनि पत्याउने नसकिने घटना घटेको छ ओखलुंगामा । ओखलढुंगाको थाक्ले भन्ने ठाउँमा छोराको सम्बन्ध सौतेनी आमासंग रहेको कुरा जब बुहारीले थाहा पाईन् तब उनले गाउँलेहरुलाई भनिन् । उनको कुरा गाउँलेहरुले पत्याएनछन् । तर जब गाउँलेहरुले बुहारीको कुरा पत्याएनन् तब ती सौतेनी आमा छोराको सम्बन्धले अझैं खुलेरै नाता कायम गर्नमा सफल हुँदै गएछ ।
श्रीमतीको निधन भएपछि छोराछोरी स्याहार गर्न भनेर बाउले विवाह गरेर ल्याएकी सौतेनी आमालाई छोराले भगाइदिएका छन् । घरमा एक महिनाकी सुत्केरीको बिचल्ली भएको छ । ससुराले विवाह गरेर ल्याए पछि सासु बनेकी उनै महिला अहिले बुहारीको सौता बनेकी छन् । बुहारी भन्छिन् अब सासु भनुँ की सौता ?
आफ्नै श्रीमानको सम्बन्ध जब सौतेनी सासुसंग रहेको कुरा बुहारीलाई थाहा भएछ तब ती बुहारीले पहिला त सासु र श्रीमानलाई धेरै ने सम्झाईछन् । तर ती आमा छोराले बुहारीको कुरा नसुनेपछि गाउँलेलाई उनले आफ्नो घरको त्यस्तो घिनलाग्दो कुरा भन्न बाध्य भएकी रहिछन् ।
यो कुरा त्यही गाउँका एक जनाले भनेका हुन् । ती छिमेकीका अनुसार ती आमा र छोराको सम्बन्धको शुरुवात यसरी भएको रहेछ ।
नेपालमा यसरी बिग्रिन्छन् वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतिहरु ! पुरुषले अबस्य हेर्नुहोस्
झापाबाट उपचारका लागि विराटनगर जाँदै गरेका युवकको बसभित्रै मृत्यु
छिमेकीको छोरासँग सम्बन्ध राखेको भन्दै आफ्नै बाबुले गरे छोरीको हनर कि’लि’ङ्ग!
कैलालीबाट आयो यस्तो दुःखद खबर, रहस्यमय मृत भेटिए
एक बर्ष अगाडि नै ह त्या गरि गाडिएकाे श व यस्तो अवस्थामा! परपुरूषसँग लहसिएकि श्रीमतिकाे चकित पार्ने बयान!
चीनले भारतको अरुणाचलमा बसायो १०१ घरसहितको बस्ती, अब के गर्ला भारतले?
“आफ्नो प्रेमिका अर्कैको श्रीमती भएपछि प्रेमीले अ’न्तिम पत्र लेखेर स’धैको लागि बि’दा भए… (हेर्नुस् भिडियो)
आमाको मृ,त्यु भएको केहि समयमै बुवाको पनि मृत्यु, छोरीले ए’ड्सवाट गु,माइन् ज्या,न !
मुख्यमन्त्री शेरधन राईसित विवाह गर्न लागेकि यी युवतीको चाहाना यस्तो! (भिडियो सहित)